Hiigsigii iyo himiladii fogayd: Dr. Cabdishakuur Sheekh Cali Jowhar (1952kii – 2012ka) Qalinka: Boobe Yuusuf Ducaale Qormadii: 3aad | Araweelo News Network (Archive) -
Subaxnimadaa aanu Boorame gelaynay, waxa kaleoo aanu jidka ku kulannay Khaalid yare oo Warfaafinta nagala hawl-gala. Markii aanu Boorame gallayba waxaanu qaadnay laammida magaalada laga galo. Hotel Harawo ayaanu midig ama bari ka marnay annaga oo woqooyi u soconna.
Waddadu waa ay soo xidhmaysaa oo waxa wajahadda kaa qabanaya boodh ay ku taallo Rays Hotel. Midig ayaanu u leexannay oo waxaanu is-taagnay bartii ay xabaashu ka qodnayd. Waanu ka noqonnay oo Rays Hotel ayaanu tagnay.